भेटघाट कस्तो भयो ? मन्त्री राई र मेयरको जवाफ,–‘एकदमै सकारात्मक’ - Nepalgunj Business
भेटघाट कस्तो भयो ? मन्त्री राई र मेयरको जवाफ,–‘एकदमै सकारात्मक’
नेपालगञ्ज २७ भदौ – शहरी विकास मन्त्री मोहमद ईस्तियाक राई र नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका मेयर डा. धवल शमसेर राणाबीच आज साँझ होटल बाटिकामा अनौपचारिक भेटघाट भएको छ । भेटघाटमा उपमेयर उमा थापामगर, उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत हरि प्याकुरेल, वडा नम्बर १ का अध्यक्ष प्रमोद रिजाल लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
भेटघाटमा समग्र नेपालगञ्जको विकासका विषयमा निकै सौहार्दपुर्ण तरिकाले छलफल भएको जनाइएको छ । मन्त्री राई र मेयर लगायत उपमहानगरपालिकाका पदाधिकारीबीच कयौं मुद्दामा दुरी बढेको अड्कलबाजी भइरहेका बेला भएको यस्तो भेटघाटले उनीहरुबीच विकासका मुद्दामा एक हुन सघाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
राजनीतिक मुद्दामा जस्तोसुकै बिमती भएपनि विकासका मुद्दामा मन्त्री र मेयर लगायत उपमहानगरपालिकाको टिमबीच फरक धारणा हुन नहुने नगरवासीको सुझावलाई उनीहरुले मनन गरेका छन् । भेटघाटबाट दुवै पक्ष निकै उत्साहित छन् । मन्त्री राई र मेयर राणाले समग्र नेपालगञ्जको विकासका लागि मिलेर जाने बताउँदै आगामी दिनमा थप सहकार्य गर्ने प्रतिवद्धता जनाए । भेटघाट कस्तो रह्यो भन्ने नेपालगञ्ज विजनेशको प्रश्नको जवाफमा मन्त्री राई र मेयर राणाले भने,–‘एकदमै सकारात्मक ! विकासका मुद्दामा हातेमालो गर्ने कुरा भयो ।’
प्रकाशित मितिः शुक्रबार, भदौ २७, २०७६ 8:25:24 PM